“Tsy Maintsy hoe Vehivavy Kiobàna Mainty Hoditra!” : Resadresaka Niarahana Tamin’ilay Mpanoratra Ao Amin’ny GV Sandra Abd’Allah-Alvarez Ramírez · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Novambra 2018 12:17 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Ελληνικά, українська, Español
Sandra Abd’Allah-Alvarez. Sary avy amin'ilay nohadihadiana. Nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Sandra Abd’Allah-Alvarez Ramírez dia psikôlôgy sady mpiasa amin'ny serasera teraka sy lehibe tao Havana, Kiobà.
Ny taona 2006 izy no nanomboka niditra tamin'ny fikatrohana, tamin'ny nanokafany ilay blaogy Negra cubana tenía que ser (“It had to be a black Cuban woman!”) (“Tsy Maintsy hoe Vehivavy Kiobàna Mainty!”, izay anoratany ny momba ny fanavakavahana volonkoditra, fankahalàna vahiny, y fifindràmonina, fanehoana an-tsary maro – saingy tsy niainga fotsiny avy amin'ny zavatra niainany manokana
Tanatiny 12 taona, nisy fiovàna mihoatra noho ny kihon-dalàna nampitaintaina ny fiainan'i Sandra. Nanangana ny Directorio de Afro-Cubanas (Index of Afrocuban Women – Tondro ho an'ireo vehivavy AfroKiobàna) izy, angon-drakitra mikasika ireo vehivavy Kiobàna manana fiaviana Afrikàna izay nitondra anjara biriky lehibe teo amin'ny fiarahamonina tao amin'ny firenena.
Ary nandao an'i Kiobà izy mba honina tao Hamburg,Alemana, hanambady ilay vehivavy tiany.
Nihen-danja be ihany ny blaogy manokana tanatin'izay folo taona izay, kanefa, ho an'i Sandra, mampiaina hatrany ny tolona ataony ny Negra cubana tenía que ser, ary koa ireo fifandraisany amin'ny tany niaviany.
Lalàna iray hafa hitany hitazonana ny afon'ny fikatrohana ataony ihany koa ny fanoratàna ho an'i Global Voices nanomboka ny taona 2014.
Anatin'ity resadresaka ity i Sandra no milaza ny tsy fitoviana ao Kiobà sy Alemaina, mikasika ny zavatra niainany sy ireo maripamantarana manokana marobe mampiavaka ny olona ifampizaràna any amin'ireo firenena tahaka an'i Kiobà toerana niaviany, ary koa Alemaina izay onenany ankehitriny.
GV : Inona no tena tsy fitoviana goavana hitanao eo amin'i Kiobà sy Alemaina raha fiaviana sy fanavakavaham-bolo-koditra no resahana?
SA : Mino aho fa ao Kiobà, tsy mba matahotra na menatra izany ny olona manambara ny maha mpanavakava-bolokoditra azy, na ny filazàna hoe tsy misy fantany izay zava-mitranga any ivelany. Raha toa ka misy olona iray mihika mafy hoe “Kisoa mainty” dia hisy olona hafa foana eo hiara-hiaiky izany. Tsy misy lalàna manokana manameloka ny fanavakavaham-bolonkoditra na ny fanavakavahana ara-piaviana hanampy anao hiatrika tranga sasantsasany. Mitoetra ao anaty sehatry ny “fametrahana ny tena ho lasibatra”, “fahamora-tohina”, ary “fahasarotana” ny zava-drehetra.
Ao Alemaina indray, misy ifandraisany manokana amin'ny fankahalàna vahiny ny fanavakavaham-bolonkoditra. Izany no mahatonga ny olona hihevitra fa vahiny izay tsy “fotsy”, araka ny fandraisan'izy ireo ny dikan'ny hoe olona fotsy aty. Afaka lazaiko ihany koa fa tsy ankasitrahan'ny olona aty ny fanavakavahana, ary na dia tsy miaina mivantana izany fanavakavahana izany aza ianao, dia ho sendra ihany fihetsika madinidinika ahitàna kely soritra fanavakavahana. Fanampin'izay, tsy hoe tsy ankasitrahan'ny olona fotsiny ihany ny fanavakavaham-bolonkoditra, fa misy mihitsy lalàna ahafahanao miaro tena.
GV : Nilaza ianao tao anatin'ny iray tamin'ireo lahatsoratrao fa rehefa mainty ao Alemaina dia midika avy hatrany fa mpifindramonina, na teraka tao amin'io firenena io ianao na tsia. Ahoana no fandraisan'ireo vondrom-piarahamonina mainty hoditra izany ?
SA : Koa satria izaho tsy teraka teto, afaka omeko anareo ny hany hevitro (mitanila) mahakasika io resaka io: heveriko fa tena zava-dehibe ho an'ny maha izy azy ny olona iray ny fahaterahany eto amin'ny maha mainty hoditra azy. Tsy mora ho an'ny olona mainty hoditra aty. Mila manazava hatrany ny zavatra ataony izy ireo, raha ny marina, ary mitenena Alemà ary tsy mahafantatra kolontsaina hafa afatsy io ry zareo.
GV : Inona no nahagaga anao, ary inona no lesona azonao taorian'ny nandaozanao an'i Kiobà ?
SA : Tsy nandrandraiko mihitsy ny fahavitan-tena azoko taty, na koa ny fahafahako mifandray sy maka lesona avy aminà karazan'olona maro. Nosy anatinà nosy i Kiobà, noho ny toerana misy azy eo amin'ny sarintany amin'ny maha tany ambony ranomasina azy, ary noho ny rafitra politika ananany.
GV : Ahoana indray no ampitahanao ireo firenena roa ireo eo amin'ny resaka fananahana ?
SA : Ao Kiobà, mbola zaza mianatra mandeha izahay. Na dia efa be ihany aza ny dingana vita, mbola betsaka no tokony ho vitaina. Alemaina indray, amin'ny maha fiarahamonina kapitalista azy, dia mihevitra kokoa ny zon'ny tsirairay. Noho izany, ankoatran'ny fananganan-jaza, ny olona LGBTQI dia misitraka ny zony tahaka ny olona rehetra ao anaty fiarahamonina.
GV : Mamela ny helok'i Kiobà ve ianao tamin'ny nanaovany izay handaozanao ny firenena mba hahafahanao manambady ilay vehivavy tianao ?
SA : Eny, mazava ho azy, fanapahankevitro manokana ilay izy. Ny tsy azoko ekena dia na dimy taorian'ny nandehanako aza, mbola iadiana hatrany ny zon'ny olona LGBTQI.
Fango voalohan’ny Tondro ho an'ireo Vehivavy Afro-Kiobàna. Nalaina tao amin'ny pejin'ilay tetikasa ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
GV : Ary eo amin'ny resaka lahy sy vavy ? Mahatsikaritra fiovàna any ve ianao ?
SA : Indrisy, tsia no valiny. Anatin'ity lahatsoratra ity aho no miresaka momban'ny fanalànjaza tsy maintsy ataon'ireo vehivavy te-hitazona ny asany na dia eo aza ny fanatsaràna ny lalànan'ny fahazoana andro tsy iasana aorian'ny fiterahana ao Kiobà. Nanangana samy irery ny fomba fitondrany io sehatra io, ny sasany amin'izy ireny dia mitranga any ivelan'ny fifehezan'ny lalàna ao amin'ny firenena.
Avy aiza no nipoiran'ilay hevitra Index of Afro-Cuban Women (Tondro ho an'ireo vehivavy Afro-Kiobàna)?
SA: Niainga avy amin'ny tsy fahitàna soritra ny tantaran'ireo vehivavy kiobàna manana fiaviana Afrikana tao anatin'ny tantaran'i Kiobà ilay izy. Natao hampifanakaikezana ireo Afro-kiobàna rehetra amin'ny vahoaka ankapobeny ihany koa ilay izy. Hatrany hatrany ary na aiza na aiza, ahitàna ny mombamomba ilay olona ao amin'ilay rakitra an-taratasy.
Amin'ny lafiny iray, fanomezako voninahitra ho an'ireo vehivavy ireo ilay Tondro ary ho fisaorako azy ireo tamin'ny zava-bitany tamiko. Amin'ny fanomezako voninahitra, manome voninahitra ny tenako koa aho.